Mailtrack: Teedzera Yako Gmail Inovhura uchishandisa iyi Chrome Plugin | Martech Zone
Mailtrack: Teedzera Yako Gmail Inovhura uchishandisa iyi Chrome Plugin
China, July 3, 2014 China, November 6, 2014 Douglas Karr
Wati wakambozvibvunza here kana kana kwete mumwe munhu akavhura email yawakatumira uchishandisa Gmail? Unogona kushandisa Mailtrack kuita izvozvo chete. Mailtrack ndeye Chrome plugin iyo inowedzera yekutevera pixel kune yako inobuda meseji. Kana wako anogamuchira achivhura email yako, mufananidzo unokumbirwa uye Mailtrack anonyora akavhura, zvichiratidza kuti yakaonekwa ine mucherechedzo mune yako Gmail interface.
Ichi chishandiso chakareruka, chinoshanda zvekuti ndinoshuvira kuti wese mutengi weemail aisunge mupuratifomu yavo. Anenge ese maemail anotumirwa uye anoonekwa muHTML fomati mazuva ano, saka iri mhinduro inoshanda. Kana iwe uri mutengi uri kushandisa Outlook, inowanzo vharira uye haidonhedze mifananidzo nekukasira kuti iwe usakwanise kunyoresa iyo yakavhurika kunyangwe mumwe munhu akadaro.
Mailtrack ine interface yakapusa kuti uone kuti ndeapi maemail akavhurwa uye kuverenga.
Gmail inofanira kungotenga iyi purogiramu kubva kuvanhu ava uye voisanganisa mupuratifomu yavo pamwe ne API nzira yekushandisa nevatengi. Muteereri weemail kunze kweiyo Chrome Browser yako haisi kuzowedzera pixel yekutevera.
Tags: Gmailgoogle apps mailmailtracktrack email inovhuratrack inovhurayekutevera pixel
Jan 17, 2017 pa 9: 12 AM
Uku kuwedzera kunotonhorera, asi ini handifarire izvo kushambadzira mune yemahara vhezheni. Pane imwe nzira pasina chero kushambadzira - https://deskun.com/, itarise.